Orinasa mpamantatra solika tokana - Mpanamboatra mpamokatra solika tokana ao Shina, mpamatsy
JCB4 Detector Gas CH4 mora may
Fampiharana: mpitsongo entona azo entina mora entina JCB4 dia fitaovana azo antoka sy azo antoka hipoaka ary natao hanakanana ny entona mora may. Detector gas burnable JCB4 dia mpanara-maso gasikara tokana tsy misy fikojakojana natao hiarovana ny mpiasa amin'ny fitrandrahana entona mandrehitra mampidi-doza amin'ny toe-javatra faran'izay mafy. Na eo aza ny halehibeny madinidinika, ny detector gas dbbible JCB4 dia ahitana endri-javatra izay matetika tsy hita afa-tsy amin'ny mpanara-maso gasikara lehibe kokoa misy ny seho lehibe, OLED, inte ...
Detector dioxide solifara SO2 azo entina CELH50
Laharana maodely: CELH50 mari-pahaizana: Famaritana fanamarinana fanamarinana fanamarinana fanamarinana fanamarinana fanamarinana: Fitaovana SO2 tokana dia fitaovana azo antoka sy porofo mipoaka ary natao hanakanana ny SO2. Mpitily SO2 tokana dia mpanara-maso solika tokana misy vidiny ambany sy tsy misy fikojakojana natao hiarovana ny mpiasa amin'ny fitrandrahana entona SO2 mampidi-doza amin'ny toe-javatra faran'izay mafy. Na eo aza ny halehibeny madinidinika, ny detector SO2 tokana dia ahitana endri-javatra izay matetika tsy hitako afa-tsy ...
Laharana maodely: CYH25 mari-pahaizana: Famaritana fanamarinana fanamarinana fanamarinana fanamarinana fanamarinana taratasy mivaingana: Fitaovana azo antoka O2 dia fitaovana azo antoka sy porofo mipoaka ary natao hanakanana ny O2. Detector Portable O2 dia mpanara-maso solika tokana misy vidiny ambany sy tsy misy fikojakojana natao hiarovana ny mpiasa amin'ny fitrandrahana entona O2 mampidi-doza ao anatin'ny toe-javatra faran'izay mafy. Na eo aza ny halehibeny madinidinika, ny detector Portable O2 dia ahitana endri-javatra izay matetika tsy hita afa-tsy amin'ny l ...
Modely ： JAH100 Fepetrapetrahana: Fanamarinana fanamarinana fanamarinana fanamarinana fanamarinana fanamarinana Fampidirana Ny fitaovana amonia dia fitaovana elektronika ampiasaina hamantarana ny fitan'ny amoniaka eo amin'ny tontolo iainana ary azo entina miaraka aminao. Rehefa mahatsikaritra fa ny fihenan'ny amoniaka eo amin'ny tontolo iainana dia mahatratra na mihoatra ny sanda fanairana efa voatondro, ny mpamantatra amoniaka dia handefa famantarana fanairana, hazavana ary hovitrovitra. Ampiasaina amin'ny karazana col ...
Fepetra takiana: Modelina fanamarinana fanamarinana fanamarinana fanamarinana momba ny fiarovana mitrandraka arintany: Fampiharana JHB4: Fampitaovana entona tsy azo avela infrared dia fitaovana azo antoka ary azo antoka fa hitrandrahana ary natao hanakanana ny fifantohana Gas ho an'ny rivotra manodidina sy mitohy. Izy io dia mandray ny teknolojia infrared NDIR miaraka amin'ny fahamendrehana avo sy valiny haingana. Ny refy fandrefesana ny entona Combustible (CH4) dia 0-5.0% na 0-100% vol. Na eo aza ny habeny, ny Infrared Co ...
Laharana maodely: CQH100 mari-pahaizana: Famaritana fanamarinana fanamarinana fanamarinana fanamarinana taratasy mivaingana momba ny arintany: Fitaovana azo antoka H2 dia azo antoka ary azo antoka fa hipoaka ary natao hanakanana ny H2. Portable H2 Detector dia mpanara-maso lasantsy tokana sy lafo ary tsy misy fikojakojana natao hiarovana ny mpiasa amin'ny fitrandrahana entona H2 mampidi-doza amin'ny toe-javatra faran'izay mafy. Na eo aza ny halehibeny madinidinika, ny detector H2 tokana dia misy endri-javatra hita matetika ao amin'ny ...
Model: GLH100 Application: GLH100 H2S Meter dia afaka mamadika tsy tapaka ny lozisialy H2S ho lasa famantarana elektrika mahazatra ary avy eo mandefa ireo fitaovana mifanentana aminy. Izy io dia afaka mampiseho ny fifantohan'ny metana amin'ny toerana misy azy ary manana ny fiasan'ny fampandrenesana transfinite mandre sy maso izany. Afaka mifandray amin'ny rafitra fanaraha-maso, fitaovana fanapahana gazy entona rivotra ary rivotra. Ampiasaina be eo amin'ny sehatry ny fitrandrahana arintany, ny zohy herinaratra sy ny mekanika ary ny fiverenana ...
Detector gas CO2 infrared portable CRG5H
Fepetrehana: Fampahafantarana fanamarinana fanamarinana fanamarinana fanamarinana momba ny fiarovana mitrandraka arintany: fampiharana infrared CO2 dia fitaovana azo antoka sy azo antoka ho an'ny fipoahana ary natao hanakanana ny fifantohana CO2 amin'ny rivotra manodidina ary tsy miova. Izy io dia mandray ny teknolojia infrared NDIR miaraka amin'ny fahamendrehana avo sy valiny haingana. Ny refy fandrefesana entona CO2 dia 0-5,0%. Na eo aza ny habeny, ny detector CO2 Infrared dia misy endri-javatra izay tsy hita afa-tsy amin'ny maro ...
Detector karbonika karbonika azo entina
Laharana maodely: CTH1000 CTH2000 CTH5000 CTH10000 Fepetram-pianarana: Fampahafantarana taratasy fanamarinana fanamarinana fanamarinana taratasy fanamarinana fisidinana: ny mpitsikilo CO portable dia fitaovana azo antoka sy voaporofo amin'ny fipoahana ary natao hanakanana ny CO. Ny detector CO Portable dia fitaovana mora vidy, fikojakojana -Fanaraha-maso entona tokana maimaimpoana natao hiarovana ny mpiasa amin'ny fitrandrahana entona CO mampidi-doza amin'ny toe-javatra faran'izay mafy. Na eo aza ny halehibeny madinidinika, ny detector CO portable dia misy featu ...
CL2 Gas Chlorine Gas Monitor Monitor JLH100
Fepetra takiana: Modelina fanamarinana fanamarinana fanamarinana fanamarinana momba ny fitrandrahana arintany: modely fanamarinana ny lozisialy momba ny fitrandrahana arintany: ny torolàlana miasa an'ny mpitsikilo gazy klôro: ny fomba fiasan'ny sensor amin'ny electrochemical dia ny mamantatra fitrandrahana entona iray. Omeo ny fitiliana solika manokana tsara indrindra, fampisehoana azo antoka, mora ampiasaina, matanjaka ary mateza. Ny akorandriaka mafy vita amin'ny plastika dia mahazaka ny fidinana sy ny fifandonana mety hitranga eo an-toerana; ny efijery lehibe ...